Rikoooo.com - zụta
Nchịkọta ụlọ Banyere Rikoooo Terminal Aro Box
Mbido akwụkwọ a na-agụghị • 6 posts • Peeji 1 of 1
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by PAYSON » 11 Dis 2017, 18:20
Enwere m ozi email site n'aka Peter Hawthorne. O yiri ka ya na ụfọdụ ndị ọrụ ibe ya chọrọ ijikọta ya na Rikooo. Biko gụọ ma hụ ma ọ bụrụ na i cheeghị na ọ dị ka njedebe nke ebe nchekwa kachasị mma na akara. Lee ihe ị chere.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by rikoooo » 12 Dis 2017, 10:19
Ndo ma enweghi m ihe ngosi nke ihe i na ekwu maka ...?
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by PAYSON » 13 Dis 2017, 00:22
M gụrụ egwu DOWNLOAD FSX, FSX-Steam na Prepar3D - Rikoooo, egosiri m ya ụfọdụ ndị ọrụ ibe anyị ma anyị na-eche na njikọta n'etiti anyị ga-arụ ọrụ nke ọma.
M na-anọchite anya ụlọ ọrụ azụmahịa nke dijitalụ na-arụ ọrụ ugbu a na ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na otu ahịa dị ka Android. Anyị ga-achọ ịmepụta ọdịnaya pụrụ iche na saịtị gị na nnọchite ahịa anyị. Maka ihe ùgwù ahụ, anyị ga-enwe obi ụtọ ịkwụ ụgwọ gị na mpaghara nke $ 65.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by PAYSON » 13 Dis 2017, 00:25
Iji nye gị echiche na ihe anyị na-eme, anyị ga-achọ ide akwụkwọ nkwado maka saịtị gị. Ndekọ a ga-abịa n'ụdị nke isiokwu 500 ma gụnye njikọ njikọ 'do-so' na onye ahịa anyị. Onye edemede nke isiokwu ahụ ga-etinye oge na saịtị gị ma nwee mmetụta maka ụda, ụdị, na ụdị ọdịnaya ị na-edekarị. Ha nwere ike ịga ma dee edere aha maka blog gị. Ị nwere ike nyocha, dezie ma jụ isiokwu ahụ ma ọ bụrụ na ịchọta na ọ gaghị adabara. Anyị chọrọ inye aka na saịtị gị ma kwụọ gị ụgwọ maka ịkwado ya. Otú ọ dị, anyị adịghị akọwa aha ndị ahịa anyị ma ọ bụ ụdị ọrụ a n'oge a - ọ bụ naanị mgbe e zigara isiokwu maka nyochaa.
Ọ bụrụhaala na ị dị jụụ, anyị ga-arịọkwa ka a ghara akara aha ahụ dị ka 'akwado'.
Na nke a, ị ga-anabata ọrụ nkwado na http://www.rikoooo.com/? Ọ bụrụ na ọnụahịa anyị nyere na email anyị gara aga ($ 65 kwa nke post) na-anabata gị, mee ka m mara ka anyị wee gaa n'ihu.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by PAYSON » 13 Dis 2017, 00:28
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by rikoooo » 13 Dis 2017, 02:35
Ihe atụ ọzọ ebe a: https://www.mail-archive.com/haproxy@fo ... 28201.html
6 posts • Peeji 1 of 1
Laghachi na “Igbe Aro”